May 2014 ~ (IT) ကိုထိုက်
10:30 PM ကွန်ပျူတာ နှင်. နည်းပညာ စာအုပ်များ No comments
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော. နဲနဲများတော. ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ. အချိန်မှဒေါင်းလို. အဆင်ပြေမှာပါ.. ကျွန်တော်. ဆိုဒ်မှာ အရင်တင်ပေးထားပီးသား စာအုပ်တွေလဲ ပါချင်ပါခဲ. ပါလိမ်.မယ်.. အဲဒီအတွက်ဆောရီးပါ..
နည်းပညာ စာအုပ်တွေ တစ်စုတစ်စည်းထဲ သိမ်းချင်တဲ.သူတွေအတွက်တော. အဆင်ပြေပါလိမ်.မယ်.. စုစုပေါင်းစာအုပ် ( ၅၀ )ပါဝင်ပါတယ်... ဖိုင်ဆိုဒ် 290 MB ရှိပါတယ်.. တစ်အုပ်ချင်းတင်ရမှာ ပျင်းလို. တစ်ခါထဲပဲတင်ပေး လိုက်တာပါ..ဟီး. ဒေါင်းဖို.ကွန်နက်ရှင် အခြေအနေကြောင်. အဆင်မပြေသေးဘူး ဆိုလဲ ဒီလင်.လေး ကို မှတ်ထားပီးနောက် ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတဲ.အချိန်မှ သာဒေါင်းကြပေတော.ဗျာ.. တင်ပီးမှသေချာပြန်ကြည်. မိပါတယ်.. နည်းပညာနဲ.မဆိုင်တဲ. စာအုပ်တစ်အုပ်နှစ်အုပ်ပါသွားတဲ. အတွက်ဆောရီးပါ.. မူရင်းစာ အုပ်ရေးသားသူများတဲ. ဆရာများအားလုံးကိုလဲ ဒီနေရာကနေပဲ ခွင်ပြုချက်ပေးဖို. အသိအမှတ်ပြုတောင်းခံပါ တယ်..
Credit/ Shwe Min Wun
ဆရာမဒေါ်ထားထားလွင် ရဲ့ Android Application ရေးသားနည်း (E-book)
10:26 PM Android Application ရေးသားနည်း (E-book) No comments
Android Application ရေးသားနည်းစာအုပ်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ယူပါ...
♪လူနဲ့ဘောလုံးမကန်ဘဲကားတွေနဲ့ဘောလုံးကန်မယ့် - Soccer Rally2Mod (Unlimited Money) v1.05 APK ♫
10:19 PM Android Game No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Game လေးကတော့ အဆန်းလေးပါဗျာ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ဘောလုံးကန်တာ ကိုကစားသမားတွေနဲ့မကန်ဘဲ ကားတွေနဲ့ဘောလုံးကန်ရမှာပါ။ ကျွန်တော်စမ်းကြီး ကမြင်းကြည့်ပြီးပါပြီ မိုက်တယ်ဗျာ။ တစ်မျိုးတော့ဆန်းတာပေါ့။ နည်းနည်းလေးတော့ခက်တာပေါ့ဗျာ။ကွင်းတွေကလည်း ပုံစံအမျိုး မျိုးရွေးချယ်ပြီး ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘောလုံးကွင်းတွေအပြင် လမ်းဘေးကွင်းတွေနဲ့ ဂိုထောင်တွေထဲမှာ လည်းကစားနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Unlimited Money ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူကစားနိုင်မှာပါ။ Android OS 4.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Apk ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Download Folder ထဲမှာပါလာတဲ့ com.iceflame.Soccer Rally2 ဆိုတဲ့ Folder ကို Copy ကူးပြီး SDcard/Android/obb/ ထဲမှာ Paste လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ အဆင်ပြေပါစေ ဗျာ။
Google.com က Tricks လေးတွေဗျို့  (I am feeling lucky tricks)
10:18 PM tips and trick No comments
Collection of Cool Google Tricks
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "google guitar" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "google snake" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Zerg Rush"လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "calculator" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "blink html" လို့ရိုက်ပြီး search မှာနှိပ်ပါ
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "google mirror" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Google Sphere" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Google terminal" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Doabarrel roll" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Google chuck norris kisses rajnikanth" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "google gravity" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Dark google" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Google underwater"လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Google Loco" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "google pacman" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "epic google" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "the answer to life, the universe and everything" ရိုက်searchနှိပ်
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "make google logo black and white" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Google.com ကိုဝင်ပါ။ "Weenie Google" လို့ရိုက်ပြီး i am feeling lucky(ဥုံဖွ)ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
10:16 PM pc facebook No comments
RSS Graffiti နဲ့ ဘလော့ပိုစ် တွေ ဖေ့ဘုတ်ပေါ် Auto Share နည်း
10:16 PM Blog No comments
မိမိဘလော့ကို လူဝင်များစေတဲ့ tips တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘလော့တင်သမျှပို့တွေကို မိမိဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျပေါ် အလိုအလျောက် ရှဲနည်းလေးတစ်ခုအကြောင်း ရေးသားတင်ပြချင်လို့ပါခင်ည။
ပထမဆုံး ဒီနေရာ ကိုသွားလိုက်ပါ။
ေ၇ာက်ရင် ပုံမှပြထားတဲ့ Go to permissions dialog ကိုနှိပ်ပေးပါ
ပေါ်လာတဲ့ confirm ဘောက်သုံးခုကို ok ပေးလိုက်ပါ။
ပုံကအတိုင်း new publishing plan ကိုရွေးပေးပါ
name မှာအမည်တစ်ခုပေးကာ create new plan မှာနှိပ်ပါ
New source မှာ နှိပ်ပြီး မိမိ ဘလော့ရဲ့ RSS Feed Link ကိုထည့်လိုက်ပါ။ Feed link ယူတာတော့အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဆင်မပြေရင် comment ချန်ခဲ့ပါ။
Add source ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ဘောက်တစ်ခုကျလာပါမယ် အဲဒီမှာ ကိုယ်ရှဲမယ့် ပို့စ်အရေအတွက်နဲ့
အရင်ပို့စ်အဟောင်းတွေကိုအရင် ရှဲလုပ်မှာလား အသစ်တွေ စ ရှဲမှာလားဆိုတာတွေရွေးပြီး save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီတစ်ခါ choose target ကိုနှိပ်ပြီး Facebook ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။အောက်ကအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်
choose target မှာ မိမိ facebook ပေ့ ဒါမှမဟုတ် မိမိ အကောင့်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပေ့ခ်ျကော အကောင့်ကော နှစ်ခုပြိုင်မလုပ်ပါနဲ့ နှစ်ခုလုံးကိုရှဲချင်ယင် plan တစ်ခုထပ်လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် save လိုက်ပါ။ပြီးတော့ OFF နေရာလေးတွေကို ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ ON ပေးလိုက်ပါ။ off လုပ်ပြီးရပ်ထားလို့လည်းရပါတယ် ON လုပ်ရင် auto share နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးပြီးခြင်း Graffiti က identifingလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာတာနဲ့ မိမိ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ plan နှစ်ခုပါခင်ဗျာ
မိမိဖုန်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့Hardwareပိုင်းကို အသေးစိပ်စစ်ဆေးပေးမယ့် Sayyoethe Tester.apk (ဖုန်းအသစ်ဝယ်ရင်ထည့်စမ်းသပ်သည့်APK)
10:08 PM Android No comments
မိမိ ဖုန်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ LCD,Battery, စတဲ့ hardware ပိုင်းတွေကို အလုပ်လုပ်မလုပ် ကောင်းမကောင်းအသေးစိပ်စမ်းသပ် ပေးမယ့်ကောင်လေးပါ...မြန်မာမူပါ
ှSYT Tester လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ Multi task ကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် မိမိဖုန်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ မော်ဒယ်တွေ၊RAM RoM တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဖုန်းအသစ်ဝယ်တဲ့အခါ ဒါလေးထည့်သွင်းပြီးစမ်းသပ် ရင် လုံးဝ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်...ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါအောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့လင့်ကနေဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပါပြီ
9:55 PM IT ဗဟုသုတ No comments